सैन्य सेवा | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
कोटी: सैन्य सेवा
सैन्य कार्डमा लेख १ 18 "बी"
सैन्य आईडी प्रकार समलि .्गीमा लेख १ "" बी "। यसलाई बाहिर फाल्नुहोस् वा कसैलाई नदेखाउनुहोस्। कोटी "बी" शान्तिको बेलामा कल गरिने छैन। अनुच्छेद १.. व्यक्तित्व विकार: अनुच्छेदले विशिष्ट (साइकोपेथी, क्षणिक ...
कनिष्ठ सहभागीको टटलमा कंधे पट्टाको किनारबाट दूरी के हो?
कनिष्ठ सार्जन्टको पट्टिमा काँधको पट्टाको किनारबाट कति दूरी छ? 3! ० 03.09.2011.०1500.२०११ को रसियन संघको रक्षामन्त्रीको आदेश बमोजिम एन १XNUMX०० "सैन्य पोशाक र संकेतहरू लगाउने नियमहरूमा ...
तिनीहरूले आमाबाबुका लागि प्रश्नहरूसँग भर्नको लागी एक प्रश्नको जवाफ दिए: आफन्तको डेटा र वेतनको आकार, आवास प्रावधान
उनीहरूले सैन्य रेजिष्ट्रेसन र नामांकन कार्यालयमा प्रश्नपत्रहरू दिन आमाबुवालाई प्रश्नावली दिए: आफन्तहरूको तथ्या on्क र तलबको रकम, आवासको प्रावधान, निश्चित रूपमा यो कानुनी हो। तपाईंलाई गोप्य जानकारी प्रकट गर्न भनिएको छैन। यदि त्यस्तो हो भने, त्यसपछि ...
B4 समाप्ति श्रेणी यो के हो?
B4 उपयुक्तता कोटी यसको मतलब के हो? फिट छैन, B-3 अझै मुश्किल फिट छ। त्यसैले तपाईं सैन्य सेवा को लागी फिट हुनुहुन्छ, तर सीमितता संग। सेना मा, जो सरल छ। जहाँ धेरै छैन ...
जहाजमा नौसेना कसरी प्राप्त गर्ने?
एउटा जहाजमा नौसेनामा कसरी पुग्ने? रूसी संघका नागरिकहरूको सदस्यता लिने नियमावलीको धारा १ to बमोजिम, रूसी संघको सशस्त्र सेनाको शाखा, सेवामा कन्सक्रिप्टको नियुक्ति गर्ने निर्णय, अन्य ...
सेना के हो? कमांडरको कार्यालय र के गर्छ?
एक सैन्य मानिस के हो। कमाण्डन्टको कार्यालय र यसले के गर्छ? यसलाई अहिले सैन्य प्रहरी भनिन्छ। नाम आफैंको लागि बोल्छ। .93.2 .XNUMX .२ कमान्डन्ट सेवाको मुख्य कार्यहरू: उपायहरूको विकास र नियन्त्रणको संगठन हो ...
के यो एक सैनिक विद्यालयमा प्रवेश गर्न गाह्रो छ र प्रवेशको लागि के आवश्यक छ ???
के यो सैन्य विद्यालयमा प्रवेश गर्न गाह्रो छ र तपाईंलाई भर्नाको लागि के आवश्यक छ ??? बरु यो छैन। रूसी संघको नागरिकता हुनु आवश्यक छ, यद्यपि नरकलाई यो थाहा छ नियमित विश्वविद्यालयमा भन्दा बढी गाह्रो छैन।
निजी कोलोन को लागी तपाईंलाई कति समय चाहिन्छ? श्रेणीमा श्रेणीबाट औसत समय! कसलाई थाहा छ?
निजीबाट कर्नलमा कति समय लाग्छ? औसत समय श्रेणी बाट श्रेणी! कसलाई थाँहा छ? यो सैन्य सेवा पारित गर्न को लागी प्रक्रिया को नियम मा एक अंश छ: Article- धारा २२
सेनाबाट स्थगितको बारेमा प्रश्न
सेनाबाट डिफेरलको मुद्दा यदि कलेजमा तपाईंको छोराले आधिकारिक रूपमा एक डिफ्रलमा उसको अधिकार प्रयोग गर्ने समय छ भने, स्वाभाविक रूपमा उसलाई दोस्रो डिफर्ट दिइने छैन। म जोड दिन्छु - औपचारिक, किनकि ...
प्रिय डेमो, वा प्रबुद्ध: एक खोप र सेनामा एक टुक्रा के हो? एक खोपड़ी एक वर्ष सेवा गर्न सक्छ? अग्रिम धन्यवाद !!!
प्रिय डेमोबेलहरू, वा प्रबुद्धहरू: सेनामा खोपडी र टुक्रा के हो? खोपडी एक बर्ष पछि सक्छ? अग्रिम धन्यवाद !!! खोपडी, बाल्ड, आत्मा, आदि एक सेना ब्यारेक अवधारणा को प्रतीक गर्दै ...
आरक्षितमा नागरिकहरूको पहिलो, सेकेन्ड र तेस्रो वर्गहरूबीच के फरक छ? मेरो रैंक कस्तो छ भन्ने पत्ता लगाउने?
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो श्रेणीका नागरिकहरू बीच के भिन्नता छ? मसँग कुन श्रेणी छ भनेर म कसरी थाहा पाउने? गत वर्ष कोटीहरूमा उमेर बर्ष अफिसरहरूको लागि बढाइएको थियो।
जग्गा शक्तिहरू ... तिनीहरू के हुन् .. यसले के समावेश गर्दछ ..?
जग्गा शक्तिहरू ... तिनीहरू के हुन् .. यसले के समावेश गर्दछ ..? भूभाग (भूमि सेना) हतियार र रूसी संघको सशस्त्र बल (आरएफ सशस्त्र बल) को सशस्त्र बलको लडाई संचालन को विधिहरु को रूप मा धेरै असंख्य र विविध छन् ...
सेनाबाट कसरी इस्तीफा अनुबंध सेवा बाट
कसरी सेना छोड्ने? सम्झौता द्वारा सेवाबाट तपाईंको सम्झौता पढ्नुहोस्, सेवाबाट बर्खास्तको सबै केस त्यहाँ वर्णित छन्। तपाईंले अनुबंधको शर्तहरूको पालना नगर्नका लागि बर्खास्तमा रिपोर्ट लेख्नु पर्छ c) जडानमा ...
मैले सम्मन प्राप्त गरें, मैले यसको लागि हस्ताक्षर गरेन ... के म सैन्य दर्ता र भर्ती अफिसमा जानु पर्छ?
मैले सम्मन प्राप्त गरें, मैले यसको लागि हस्ताक्षर गरेन ... के म सैन्य दर्ता र भर्ती अफिसमा जानु पर्छ? सदस्यता ग्रहणको उमेर, सैन्य दर्ता र दर्ता कार्यालयमा देखा पर्न बाध्य छ, र यो कसरी सैन्य सेवाबाट अपहरण हुन्छ, कानूनको ज्ञान होईन, ...
नमस्ते, म सुरक्षा को सेमेनव रेजिगेसन ब्रिगेड मा एक त्वरित सेवा गर्न को लागी निर्धारित भएको थियो म वहाँ प्राप्त गर्न मा अफसोस हुनेछु?
नमस्कार, मलाई सेमीयोनव्स्की रेजिमेन्टमा सुरक्षा सेवामा खटाइएको थियो, सुरक्षा ब्रिगेड, के त्यहाँ पुग्दा मलाई पछुतो लाग्छ? जहाँ भर्ती कार्यालयले तपाइँलाई निर्धारण गर्‍यो, यो सबै फोहोर हो, तपाइँ केवल तपाइँको फौजहरूलाई चिन्नुहुन्छ
एक सेवानिवृत्त अधिकारी र रिजर्व मा एक अधिकारी को बीच के अंतर छ?
एक सेवानिवृत्त अधिकारी र रिजर्भ अधिकारी बीच के फरक छ? पहिलो उत्तर सब भन्दा सहि छ। तिनीहरू सैन्य सेवाबाट रिटायर हुन्छन् वा रिजर्भमा। तिनीहरू बीचको भिन्नता वास्तवमा कोटीमा छ ...
कसलाई सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरूसँग सम्बन्धित छ?
सार्वजनिक क्षेत्रका कर्मचारीहरू को हुन्? बजेट समूहका कर्मचारीहरू संगठन, संस्था, उद्यमहरू, आदि मा कार्यरत कर्मचारीहरू समावेश छन्। संरचनाहरू सम्बन्धित बजेटबाट संघीय, स्थानीय वा सम्बन्धित विषयको बजेट ...
किल्ला योजना के हो? किल्ला योजना के हो? मैले अन्य अवस्थित योजनाहरूको बारेमा जानकारी कहाँ पाउन सक्छु?
योजना किल्ला के हो? योजना किल्ला के हो? अन्य अवस्थित योजनाहरूको जानकारी कहाँ पाउन सक्छु? तपाईलाई आवश्यक नभएको जानकारीले तपाईको टाउको भर्नुहोस्। योजनाहरूका बारे सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ ...
एक सैन्य टिकट कत्तिको छ र यो कहाँ जान्छ
एक सैन्य आईडी कति खर्च हुन्छ र कहाँ सेन्ट पिटर्सबर्ग आधिकारिक बिक्री मा एक वकील परामर्शदाता को अस्सी हजार रूबल सम्म वा अपराधीको तलब वा अन्य आय को राशि मा 70० हजार किन्न को लागी ...
सैन्य कार्यालयको अधिकारको लागि अध्ययन, बी को लागि कती लामो समय सम्म प्रशिक्षण गर्दछ?
सैन्य दर्ता र नामांकन कार्यालयबाट इजाजत पत्रको लागि अध्ययन गर्दै, B श्रेणी को लागी कति समय लाग्छ? कन्सक्रिप्टको अनुरोधमा, सैन्य दर्ता र नामांकन कार्यालयले उनलाई "श्रेणी सी को ड्राइभर प्रशिक्षण" कार्यक्रम अन्तर्गत नियमित ड्राइभि driving स्कूलमा प्रशिक्षण दिन पठाउँदछ।
55 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,902 प्रश्नहरू।